Imikhiqizo Abakhiqizi | China Imikhiqizo abahlinzeki & Ifektri
Ibhodlela lethu elihle liyisitsha esihle soTshwala bakho, amabhodlela ethu angenziwa ngezinto zekristalu ezimhlophe nezimhlophe, umjikelezo wokukhiqiza okusheshayo, ikhwalithi enhle, singumholi embonini yamabhodlela, siqinisekisa ikhwalithi. Lawa mabhodlela engilazi eshinyene anesitayela futhi aqinile. Kulula ukuphatha emicimbini, ezinsukwini, ejimini noma emsebenzini. Ungesabi ukuyisa noma yikuphi. Ibhodlela lombala licacile, licacile.I-enclosed ishibhile futhi iyakhanya. Okokusebenza - Okuhlala isikhathi eside ...